GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Bislama Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Oromo Otetela Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Telugu Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Urdu Valencian Xhosa Yoruba Zulu
Ọtụtụ puku Ndịàmà Jehova ndị na-asụ asụsụ Tigalọg si n’obodo ha bụ́ Filipinz gaa otu mgbakọ ukwu e nwere n’asụsụ ha na Rom dị́ n’Ịtali. Njem a were ha ihe karịrị puku kilomita iri. E nwere mgbakọ a na Julaị 24-​26, afọ 2015.
O teela ọtụtụ ndị Filipinz ndị a bí ná Yurop na-ahụbeghị ala nna ha nakwa ndị enyi ha bí n’obodo ndị ọzọ dị́ na Yurop. Ná mgbakọ a, ọtụtụ n’ime ha hụrụ ndị enyi ha ha na ha matara mgbe ha dum na-aghọbeghị Ndịàmà Jehova. Mana ugbu a, ha niile bụzi ụmụnna. (Matiu 12:48-​50) Otu nwoke aha ya bụ Fabrice kwuru, sị, “Ịhụ ndị mụ na ha si otu ebe mere m nnọọ obi ụtọ.” Ka e mechara mgbakọ a, otu nwanna nwaanyị ji obi ụtọ na-asị, “Mgbakọ a ejikọtala anyị ọnụ ọzọ.”
Mgbakọ Ukwu Ndịàma Jehova Na-enwe Kwa Afọ